IIPAKETHI EZI-9 EZIMANZI EZIMANZI EZIMANZI NGO-2021 - IZIXHOBO
Iipakethi ezi-9 eziManzi eziManzi eziManzi ngo-2021
Uzalelwe ukugquma, uzalelwe ukuba uzulazule. Kodwa apha endleleni kuyakubakho umoya nemvula, kungangcono ke ukulungele.
Ubhaka ongena manzi unokufika kakuhle xa usendleleni okanye kwindlela, kwaye ufuna into yokugcina zonke izinto zakho zikhuselekile kwaye zomile. Kulapho olu luhlu lungena khona.
Mhlawumbi uye waqaphela ukuba iibhegi zobhaka ziyi-dime yeshumi elinesibini, kodwa ipakethe ephezulu kakhulu engenawo amanzi ifanele ubunzima bayo kwigolide. Iyakukubona kuzo zonke iintlobo zemozulu, kwaye ugcine izinto zakho zehlabathi zikhuselekile engozini.
Ezi zezona zibhegi zingangenwa manzi sizame ukuvavanya kulo nyaka. Zinzima, zikhululekile, kwaye okona kubaluleke kakhulu, zinika ukhuseleko kwizinto. Nokuba uphume koololiwe okanye uzama nje ukubamba umgaqo ongaphantsi, uya kufuna ukunxiba enye yezo bhaka zingangenwa ngamanzi.
1. Umhlaba wePak Pak oManzi
Kunzima ukufumana isiphoso kwi-Earth Pak Waterproof Backpack. Yenye yeepakethe ezimbalwa ezikhoyo apho eziyinyani, ngokupheleleyo, i-100% ingena manzi. Yiya phambili kwaye uyicekise echibini. izinto zakho zizolunga. Nditsho neepokotho ezifakwe ngaphandle ezigcina amanzi ngaphandle.
Ukuvalwa kweRoll-top kwenza ukuba ipakethi ibe lula ukuyisebenzisa, kwaye ikhuselekile kuzo zonke iintlobo zokuhamba, kubandakanya ukuhamba ngomoya. Imitya ebotshiweyo kunye nephaneli yangasemva ethambileyo iyenza ibe mnandi kwaye iphefumleke, kwaye ibhanti elinomthwalo onzima likunika inkxaso eyongezelelweyo.
Ubhaka woMhlaba oManzi ongangeni manzi uza ngobukhulu be-35L kunye nama-55L, ukuze ukhethe ipakethe ehlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho. Yibhegi enkulu yokuloba kunye nokuhamba ngesikhephe, uhambo lwe-rafting kunye ne-kayak.
2. Umqolo wobhaka wabakhweli
Ngokulinganayo ekhaya ehlathini naseofisini, iRidge Commuter Backpack liqabane elithembekileyo kuzo zonke iintlobo zemozulu. Nangona yenye yeepakethe zomthengi kuluhlu lwethu, uMkhweli wakhelwe ukuhlala, kwaye wakhiwe ukugcina zonke izinto zakho zexabiso zikhuselekile.
Ngeqokobhe le-nylon le-600D elingangeni manzi, le pakethi ikhupha amanzi njengeshishini lamntu. Inayo ilaptop holster, ipokotho eyilelwe ukuhlala iRidge Power Bank, kunye nezibuko le-USB lokutshaja ngeselula.
Umkhweli ligama elilungileyo lale phakeji. Ungayiphosa phezu kwegxalaba lakho kwaye uthathe uloliwe okanye uhambe uye emsebenzini ngaphandle kokujonga ngokungathi usandul 'ukuhla ngomkhondo. Kunokubakho iipakethi ezingcono phaya zababhexeshi abanzulu, kodwa bambalwa abalunge ngakumbi kulowo uzonwabisa edolophini.
3. Eddie Bauer Umthwalo wempahla
iiwotshi zedijithali ezona zilungileyo
Xa usendleleni (kunye nohlahlo-lwabiwo mali) i-Eddie Bauer Cargo Pack lukhetho olukhulu lokugcina izinto zakho zikhuselekile emvuleni. Yenziwe ngerhabaxa kunye nokuwa kwe-600-denier ripstop polyester enesiphelo sokumelana namanzi.
ICargo Pack irhabaxa kwaye ivulekile, inamandla angama-29L kunye nobuninzi beepokotho kunye namagumbi. Le yipakethi enkulu yabantu abathanda ukuhlala behlelekile.
Ukubiza le pakethi ukuba kungangenwa manzi ngokupheleleyo kunokuba yinto elula. Kodwa iyakwazi ukumelana namanzi ngokufanelekileyo, kwaye lukhetho olukhulu kubahambi, okanye ngabafundi abafuna ukugcina iincwadi zabo zomile ngeentsuku zemvula phakathi kweklasi.
4. Yeti Yenza ubhaka 28
Ichazwe njengenqaba yezixhobo ezingangeni manzi. i-YETI Panga 28 imalunga nokungenisa umoya kunye nokungangeni manzi njengoko ingena. Uninzi olunombulelo kwiipakethe ze-HydroLock zippers, eziyilelwe ngokukodwa ukwenza itywina elingenakungena.
Iqokobhe langaphandle lenziwe ngenayiloni exinene kakhulu nge-TPU lamination eshinyeneyo, ke ngoko iyakrazuka- kwaye inganyangeki ukuba lingonakali kwaye ingangeni manzi. Ngomthamo we-28L, kukho igumbi leempahla ezininzi, kwaye imitya yesifuba esuswayo kunye nebhanti yesinqe zibonelela ngentuthuzelo engakumbi kunye nozinzo.
Unganxiba ukunyuka intaba nge-YETI, ukuskiya, ukukhwela ikayaking — naphi na apho ucinga ukuba kungafinyiswa okanye kudakwe — uze uqiniseke ngokwazi ukuba yonke into ikhuselekile ngaphakathi.
5. IBlack Ember Citadel R2
Eyilwe ngamehlo amdaka, amancinci, iBlack Ember Citadel R2 yindawo entle engenamanzi engazibizeli ingqalelo enkulu kuyo. Umaleko wayo omathathu, i-800D yelaphu le-Microhex imalunga nokungafikeleleki njengoko ifika.
Le pakethi inezinye izinto esizithandayo, kubandakanya ingxowa yeLaptop eyi-15 kunye neeziphu ezitshixwayo kwiphokotho yangaphambili. Imitya inokuthi igcinwe kude, ikuvumela ukuba uphathe isitayile sephetshana ukuba ukhetha njalo.
IBlack Ember Citadel R2 yenziwe ngeemoto ezisezidolophini engqondweni, kodwa yipakethi yokuhamba enkulu nayo. Isebenza kakuhle njengenqwelomoya yokuthwala ibhegi, kwaye inendawo yokugcina eyaneleyo yokuhambisa izinto zakho zemihla ngemihla ngelixa uphumile, nokuba usemsebenzini okanye useholideyini.
6. I-Otterbox Yampa 70 iDuffel eyomileyo
I-Otterbox yenza ezona zixhobo zingangenisi manzi kwimarike, kwaye iYampa 70 Dry Duffel yayo iyahlukile. Le bhegi inokuntywila ngokupheleleyo, ineeziphu ezingangeni manzi kunye nemitya.
dating imibuzo ukubuza intombazana
Iphedi yangemuva kunye neephedi zamagxa ziyacofana kwaye ziyaphefumla. Ingxowa yenziwe nge-NYU-camera ngeyiloni enesiseko esinzima somsebenzi esichasa iinyembezi, ukubhoboza kunye nokuqaqamba.
I-Otterbox Yampa 70 iDry Duffel inokubonwa njengonobunzima bokupakisha ubhaka, kodwa njengempahla engenamanzi ilungile. Ungayinxiba njengobhaka okanye uyiphathe njenge-duffel, kwaye inokusetyenziselwa ukukhangela okanye ukuphatha imithwalo yohambo lomoya.
7. Ulwandle ukuya kwiNgqungquthela ye-Hydraulic Dry Pack
Ulwandle oluya kwiNgqungquthela ye-Hydraulic Dry Pack luyilelwe iimeko ezifuna ukungangeni manzi ngokupheleleyo. Ilungele i-kayaking, i-portaging, i-canyoneering, kunye nawuphi na omnye umsebenzi obandakanya amanzi.
Ipakethi eyomileyo isebenzisa ityhubhu ye-EVA kunye netekhnoloji yomoya yokubopha umoya ukwenza ukukhanya kunye nokuphefumla, kodwa iphantse ingangeni emanzini. Ngokuphantse kungenakufikeleleka, sithetha ukuba kunokuthatha i-dunked, kodwa ingagxinwa ngokupheleleyo ixesha elide.
Sizamile ubungakanani be-35L kwaye sayifumana ilungile kuhambo losuku. Kuza kwakhona ngo-65L, 90L kunye nobukhulu obukhulu be-120L kwii-adventures ezongezelelweyo.
8. IPatagonia Stormsurge Roll Top Pack 45L
IPakegonia Stormsurge Roll Top Pack yenzelwe ukuhambisa ixesha elide. Ayinamanzi ngokwaneleyo ukuba ayithathe ayokudada, kwaye inokwakhiwa kwenayiloni engasindi kunye nokugqitywa kwe-DWR ene-fluor.
Uyilo oluphezulu lokuqengqeleka neziqhoboshi ezisecaleni kulula ukuzisebenzisa kunye nokusebenza ngokugcina amanzi ekufumaneni indlela yawo ngaphakathi. Ngobungakanani be-45L, ungayifaka le pakethi ngazo zonke iintlobo zegumbi elinendawo yokugcina.
Ipakethi ayinazo iipokotho ezininzi, izixhobo okanye izinto. Yenza into enye-ukugcina izinto zomile-kwaye iyenza kakuhle. Liqabane elihle ekulobeni, ukusefa kunye nokuhamba kwamanzi amhlophe.
9. Imvula ubhaka okungangenwa ngamanzi
Ininzi into oyithandayo malunga neRackpack yoKhuseleko lwaManzi. Ngelixa kunokuba nokuchaneka ngakumbi ukuyibiza ngokunganyangeki ngamanzi, le ubhaka ayenzelwanga ngokwenyani kunye nokusetyenziswa kwamazwe angasemva okuxineneyo engqondweni.
Yenzelwe ngakumbi ukunxiba ezidolophini, kwaye ilungele ukuhambisa ilaptop yakho kunye namaxwebhu abuthathaka ngemini enethayo. Ipakethi ineprofayili encinci, ke jonga ii-specs ngaphambi kokuba uthenge; Iilaptops ezinkulu kune-13 ″ inokuba kukuxinana okuqinileyo.
Imvula yobhaka wamanzi engenayo ikwayipakeji entle ngokwenene, enoyilo lwangoku, olunesitayile. Ihlala kamnandi, ifakwe ngaphakathi ngokupheleleyo kwaye inezinto ezithile ezibonisa ubuqhophololo kunye nokuvalwa kwe-magnetic-snap.
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo ubhaka ongangenwa ngamanzi
Ukukhetha ubhaka wamanzi ongafanelekanga kunokuba yinkohliso, kwaye kuxhomekeke kakhulu kwiimfuno zakho ezithile. Ngaba ujonge ipakethi erhabaxa yolonwabo lwangaphandle? Ingxowa engena manzi iimpahla zakho kunye nemithwalo kuhambo olwandisiweyo? Indawo ekhuselekileyo yokugcina izinto zakho zexabiso zomile ngelixa usiya emsebenzini okanye uphuma malunga nedolophu?
Umgangatho, ewe, ukwayinkxalabo. Ayisixeleli ukuba ayizizo zonke iibhegi ezinamanzi ezenziwe ngokulinganayo. Uninzi luya kuthi ekugqibeleni luphulukane namandla alo okuhlala omile ngokunxiba okuqhelekileyo kunye nokuqhekeka, kwaye uninzi luwela kwindawo ethile kumanzi anganyangekiyo, kodwa kwindawo ethile emfutshane yokungabinamanzi ngokwenyani.
Ezinye zezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ujonge kuzo zibandakanya:
Ukungena manzi ngokuchasene namanzi: Nika ingqalelo kwindlela imveliso echazwa ngayo kwiwebhusayithi yomenzi, kwaye ukhumbule ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kokungangeni manzi nokungangeni kwamanzi. Ekupheleni kosuku, omabini la magama entengiso angahlali echanekileyo. Khangela amabinzana afana ne-100% angangeni manzi ukubonisa ukuba ibhegi ayinamanzi kwaphela. Kufanelekile nokwazi ukuba uninzi lweebhegi ekuthiwa zingangeni manzi zisenokuvuza ukuba zitshone ngokupheleleyo emanzini ixesha elide.
Izinto zangaphandle: Jonga kwiwebhusayithi yomenzi ukuze ubone ukuba ibhegi yenziwe ntoni, kwaye idityaniswe nantoni. Iingxowa ezininzi ezingenawo amanzi zenziwe ngeyiloni nge-Thermoplastic polyurethane (TPU). Ukuba ubona ibinzana elibhalwe i-TPU, i-TPU-laminated, okanye into efanayo, ihlala iluphawu oluhle.
Inqanaba le-IP: Akunabo bonke abavelisi abala uluhlu lwe-IP lweemveliso zabo, kodwa ukuba benza njalo, oku kuya kukunika ingcamango efanelekileyo yesikhwama sokugcina amanzi. Inqanaba le-IP limele inqanaba loKhuselo lwe-Ingress, kwaye sisilinganiselo sokungafikeleli kwezinto. Ukulinganiswa kwe-IP kubandakanya oonobumba be-IP abalandelwa ngamanani amabini (IP67 umzekelo). Inombolo yokuqala ibhekisa kukunganyangeki kwezinto kwizinto eziqinileyo, okwesibini kulwelo. Njengomgaqo jikelele, ukuba inani lokugqibela li-5 okanye ngaphezulu, ngoko ke izinto zixhathisa kakhulu ngamanzi. Ukuba inani lokugqibela li-8, linokuntywiliselwa ngokupheleleyo ngaphandle kweziphumo ezibi.
Ukutywina kunye nokuvalwa: Oobhaka abangangenwa ngamanzi basebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zokutywina kunye nokuvalwa ukuqinisekisa ukuba amanzi awangeni kuzo. Uninzi lweengxowa ezingaphandle ezingangeni manzi zisebenzisa ii-roll-top seals, ezinokusebenza ngokukuko. Iingxowa ezininzi zisebenzisa iiziphu ezingangeni manzi okanye ezingangeni manzi, kodwa gcinani engqondweni ukuba ayizizo zonke iiziphu ezikhuselayo emanzini. Ukuba inkcazo yemveliso ayitsho ukuba i-zipper ayinamanzi, mhlawumbi akunjalo.
Ubungakanani: Khetha ubhaka onokubamba zonke izixhobo zakho, ukuba uyafuna njalo. Umthamo woobhaka ulinganiswa ngeelitha, kwaye iipakethi zokuhamba ngentaba zihlala zisuka kwi-35L yepakethi yosuku iye kwi-65L okanye nangaphezulu kwipakethi yobhaka eyenzelwe uhambo olude. Ukuba ufuna ubhaka ongangenwa ngamanzi ukuze uwasebenzise yonke imihla, qiniseka ukuba mkhulu ngokwaneleyo ukuba ungabamba ilaptop yakho kunye / okanye naziphi na iincwadi ekufuneka uzithutha.
Ii-FAQ zebhokisi engamanzi
Ndidinga ubhaka ongena manzi?
Malunga naye nabani na unokufumana ukusetyenziswa kwisingxobo esingangenwa ngamanzi, nokuba ungumntu othanda ukuhamba intaba kunye no-kayaker, okanye umane efuna ingcali efuna ukufumana ilaptop yakhe kunye namaphepha ukuya nokubuya emsebenzini ngaphandle kokuba kunethwe.
Ngaba oobhaka be-canvas bathintela amanzi?
Kunokwenzeka. I-Canvas ngokwayo ayisiyonto ingena manzi, kodwa inokudityaniswa naliphi na inani leetywina ukuyenza ingangeni manzi, okanye ubuncinci ukumelana namanzi. I-Canvas ayisetyenziswa njengesixhobo sangaphandle njengesiqhelo, kwaye oobhaka banamanzi banamhlanje baqhele ukwenziwa ngenayiloni okanye ipholiyesta.
Ngaba iibhegi zika-5.11 azinamanzi?
Qiniseka ukuba ujonga ii-specs zayo nayiphi na ubhaka ngaphambi kokuba uyithenge. Inkampani eyi-5.11 ubukhulu becala yenza ubhaka ngobuchule, uninzi lwazo alunamanzi kakhulu kodwa hayi, ngokungqongqo, alunamanzi.
Ngaba ubhaka boMntla busemanzini?
Uninzi lweobhaka zaseNyakatho zobuso zinokumelana namanzi, kwaye ezimbalwa azinamanzi kwaphela. Kwakhona, qiniseka ukuba ufunda ngononophelo inkcazo yemveliso ngaphambi kokukhetha ipakethi.
imibuzo elungileyo ukubuza amantombazana
wavuka kunye nomkhono we tattoo
izimvo zokulala ezincinci zamadoda
iiTattoos zemikhono yesizwe emadodeni
iihempe ezihamba neebhulukhwe eziluhlaza